IOS 7 zavatra mety tsy fantatrao momba | Vaovao IPhone
IOS 7 Zavatra mety tsy ho fantatrao
iOS 7 no kintan'ny 24 ora farany, miaraka amin'ny fampahalalana na aiza na aiza alehanao momba ny zava-baovao ateraky ny rafitra fiasa finday vaovao an'ny Apple. Fa ity Beta voalohany ity ahitàna zavatra betsaka izay zara raha notononin'i Apple nandritra ny Keynote, na tsy nipoitra akory. Aorian'ny fitsapana 24 ora ny Beta voalohany an'ny iOS 7 amin'ny iPhone 5, azoko aseho anao ny sasany amin'izy ireo.
Spotlight tsy mitazona pejy iray amin'ny solaitrabe intsony. Azonao atao ny miditra amin'ny fikarohana an'ny iOS amin'ny pejy rehetra amin'ny alàlan'ny fidinana, avy eo dia hiseho ilay boaty izay ahafahanao manoratra ny karoka nataonao. Jereo ny kisary an'ny mijery iOS, izao dia manamarika ny fotoana amin'ny fotoana tena izy ary koa mihetsika ny tanana faharoa. Ao amin'ny fampiharana Mail azontsika atao ny misafidy ny hafatra rehetra indray mandeha ary manisy marika azy ireo ho toy ny novakiana (na mbola tsy novakiana).
La multitask azontsika atao ny mankafy azy io amin'ny fomba maoderina Raha te hanala rindranasa mihoatra ny iray isaky ny indray mandeha amin'ny bara marobe ianao, dia azonao atao ny mampiasa rantsan-tànana roa hanalana azy ireo ary samy hikatona tanteraka izy ireo.
Ao anatin'ny menio Settings no ahitantsika safidy vaovao. Ao amin'ny Data momba ny finday Azontsika atao ny mahita ny fanjifana angon-drakitra isaky ny rindranasa napetraka, ary azonay foanana mihitsy aza ireo rindranasa ireo mba tsy handany data, tena mahaliana tokoa mba tsy hampitsahatra ny taham-data ny rindranasa sasany. ny Fanavaozam-baovao mivantana Ilaina tokoa izy ireo, maro aminareo no mitaraina noho izany, fa raha misy tsy maniry Apple hanapa-kevitra hoe rahoviana izy no hanavao ny rindranasa, azonao atao ny manala azy ireo ary mampita azy ireo amin'ny manual avy amin'ny Settings> iTunes Store sy App Store. Ao amin'ny tsiambaratelo dia hahita safidy vaovao iray hafa isika: mikrô. Ny fangatahana te hampiasa ny micro-nay dia tsy maintsy mangataka alalana mialoha.
Ho fanampin'ny vokatra "Parallax", izay misy ny sary mihetsika "mihetsika" arakaraka ny toeran'ny fitaovana, manome fahatsapana halaliny, iOS 7 dia manana fiaviana mavitrika, izay azonao faritana avy amin'ny Fikirana, ary koa, raha ianao eFA sary panoramika nalaina niaraka tamin'ny iPhone, azonao atao ny mametraka azy ireo ho lasa ambadika ary rehefa mihodina ny fitaovanao ianao dia ho hitanao ny sary panoramic. Andramo fa tsy mandeha foana io fa rehefa manao ianao dia effets be liana be.
Ny fampiharana Maps Izy io dia nohavaozina mba hifanaraka amin'ny endrika vaovao ankapobeny an'ny iOS 7, saingy misy ihany koa ny fiasa vaovao: maody alina mandeha ho azy rehefa mampiasa fitetezana miaraka amin'ny fampiharana Maps, izay hovelomina miorina amin'ny fotoanan'ny fitaovana sy ny sensor sensor. Fanampin'izany, ny fandrindrana ny tsoratadidy iCloud dia hahatonga ny toerana rehetra soratanao amin'ny tsanganana iray amin'ny fitaovana hafa izay manana ny maha-izy azy iCloud.
Ny rindranasa finday dia mitondra tsy ampoizina maro ho antsika. Voalohany, ny toerana tena farany dia asehony amintsika ny sarin'ireo fifandraisana izay nampiana, dingana voalohany, iza no mahalala raha tsy ho ela dia ho ampiana amin'ny fandaharam-potoana io. Rehefa miditra amin'ny fisie ifandraisantsika isika, afaka jerentsika hoe inona ny serivisy azontsika ampiasaina miaraka aminy misaotra ireo sary masina miseho eo ankavanan'ny data. Ohatra, raha afaka mampiasa iMessage amin'ny alàlan'ny mailaky ny fifandraisana isika, dia hiseho eo ankavanany ny balloon hafatra ankoatry ny kisary mailaka. Amin'ny alàlan'ny fipihana ny kisary dia afaka miditra mivantana amin'ilay rindranasa mifanaraka aminy isika. Saingy tsy izany ihany, satria noho ny fiasa vaovao hitantsika eo amin'ny toeran'ny telefaona dia afaka manao izany isika fanakanana antso, FaceTime ary hafatra amin'ny fifandraisana rehetra ananantsika amin'ny fandaharam-potoananay, vaovao tsara ho an'ireo izay nampiasa ny Cydia's iBlackList.
Santionany amin'ireo vaovao azontsika jerena ao amin'ny iOS 7 ireo ary zara raha nisy fiatraikany tamin'ny haino aman-jery. Fa tsikelikely azoko antoka fa betsaka ny hiseho. Hampahafantatra anao izahay.
Fanazavana fanampiny - iOS 7: singa fototra ny famolavolana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » IOS 7 Zavatra mety tsy ho fantatrao
Mieritreritra ny hametraka ny beta amin'ny iPad-ko aho, ary manana fisalasalana kely: mandeha tsara ve ny beta? Afaka miverina amin'ny iOS 6 ve ianao raha tianao?
Ho an'ny iPad dia mbola tsy misy beta azo ampiasaina. Raha afaka miverina amin'ny iOS 6 mora ianao.
Juan Angel dia hoy izy:
Raha apetraka amin'ny iPad ny beta, azoko atao ve ny miverina amin'ny IOS 6 ary manao ny jailbreak izay nataoko sa ho very aho? Miarahaba sy miarahaba ny asa vitanao
Valiny tamin'i Juan Ángel
Azonao atao ny misintona fa manadino ny Jailbreak satria hametraka ny iOS 6.1.3 ianao.
Salama, manana olana amin'ny iOS 7. Ahoana no ahafahako manitsy sy / na mamafa ireo fifandraisana?
Mandehana any amin'ny fifandraisana apetraka ary tsindrio ny bokotra fanovana eo ankavanana ambony
boikoten dia hoy izy:
Ary farany misy lahatsoratra ankoatran'ny «zahao ny bilaogy eo akaikinao ary manorata» Arahabaina 😉
Azoko antoka fa hifoha isika rahampitso miaraka amin'ireo bilaogy hafa manasongadina ny vaovao izay vao navoakanao.
Mamaly an'i boikoten
Misaotra !!! Faly be aho fa tianao. 😉
fsolabenitez dia hoy izy:
Ary ny batterie ????? satria hahasento ahy amin'ity beta ity aho ……….
Mamaly an'i fsolabenitez
Eny, tsy maharitra izy io, fa mahazatra amin'ny Betas voalohany.
Ao amin'ny iPhone 5-ko dia tsy mandeha ny maodely marobe multitasking; (
Tsy mandeha izany raha tsy rehefa manokatra azy amin'ny rindrambaiko miasa amin'ny tontolo.
Eva934 dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara ry Luis, toy ny mahazatra!
Valiny tamin'i Eva934
Jonathan inkwell dia hoy izy:
izany hoe .. afaka maheno anao amin'ny alàlan'ny mikrô izy ireo .. tsy maninona na manome alalana ianao .. raha misy manam-pahefana mahavita an'izany na izany aza xd dia misy tsy fahampian'ny fiainana manokana manokana
Mamaly an'i jonathan inktero
Izy ireo dia nitahiry ny toerana nisy anay tamin'ny GPS nandritra ny taona maro, inona no andrasanao?
Chris7223 dia hoy izy:
Salama. Mitranga izany fa mila manova ny fidirana amin'ny internet amin'ny iphone 5 amin'ny ios 7 aho ary tsy fantatro hoe aiza no hahitako azy, heveriko aza fa nofoanan'izy ireo izany safidy izany ka nitady be aho! Azonao atao ve ny manampy ahy azafady, nanova ny mpandrindra findaiko fotsiny aho ary mila manova izany mba hiasa amin'ny Internet! Misaotra mialoha!
Valiny tamin'i Chris7223
Mora izany. Avy amin'ny fitaovanao mankany amin'ny pejy manaraka: http://unlockit.co.nz ary safidio ny firenena sy ny mpandraharaha, apetraho ilay taratasy fanamarinana izay alaina ary dia izay.
iOS 7: Fampiharana, fitaovana vaovao ary ny endriny (II)
Fampitahana: sary masina iOS 6 vs kisary iOS 7